DRRDay2021Myanmar – PVTV Myanmar
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ Moderator – ဒေါင်း Panelists – ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ဒေါက်တာတူးခေါင်၊ မခင်နှင်းကြည်သာ နေ့ရက် – ၁၃ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ အချိန် – ညနေ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ပါးရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး “Together we can win” ရေးသားသူ – Sharon ရွတ်ဖတ်သူ – နွေဦးလင်းအိမ် Only together, can we save the planet! Only together, can we win the democracy!#OnlyTogether #DRRDay2021Myanmar#StopManmadeDisasterinMyanmar#PVTV#SpringRevolution...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ပါးရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး သမိုင်းလှစေမှာလား IDDRR ရေးသားသူ – မျိုးချစ်သွေး ရွတ်ဖတ်သူ – ကျော်နွေဦး Only together, can we save the planet! Only together,...